Zvinotaridza kuti svondo rino hatizove nemabeta shanduro dze macOS | Ndinobva mac
Zvinotaridza kuti svondo rino hatizove nemabeta shanduro dzeMacOS
Uye ndezvekuti isu tatova Chishanu uye mushure mesvondo rapfuura Apple yakaburitsa maviri beta mavhezheni ema macos zvinoteedzana, vhiki rino zvinoita sekunge zvichapera pasina chero beta vhezheni isingawanikwe yevagadziri kana yevashandisi vakanyoreswa muchirongwa cheveruzhinji beta.
Shanduro dzekupedzisira dze beta dzeApple dziri kuwedzera zvigadziriso mukati mehurongwa uye zvishoma kana kutadza kuona kune mushandisi, asi zvakaenzana kana zvakakosha kupfuura zvinoonekwa. Ichokwadi icho Zvinogona kunzwika sekudzokorora asi zvakakosha kuti uve neakanaka beta vhezheni chirongwa kuitira kuti urege kuwedzera zvakakosha zvikanganiso kana zviputi mushanduro dzekupedzisira dzinosvika mamirioni evashandisi.
Ichokwadi kuti kunyangwe paine akawanda beta shanduro dzinoburitswa kune vanogadzira uye beta bvunzo dzimwe nguva madhiragi anoonekwa mushanduro dzekupedzisiraNeichi chikonzero, zvinofanirwa kuve pachena kuti hazvina kufanana kuti zviuru zvevagadziri kutenderera pasirese zvive beta, pane kuti mamirioni evashandisi anovandudza makomputa avo.
Apple ine vazhinji vashandisi kuyedza betas uye izvi zvakanaka kune wese munhu, zvakare ine yekuyedza Safari Technology Preview browser, iyo iyo inogoneka yekuvandudza mashandiro eSafari mune ekupedzisira shanduro. Chero zvazvingaitika svondo rino kana zvinhu zvikasachinja panguva yemasikati nhasi, hatitende kuti shanduro dze beta dzichaburitswa uye izvozvi neChishanu Chishanu pamusoro uye Zuva rekutenda muUnited States, Zvinoita sekunge isu tichapera mabheta kusvika svondo rinouya.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » Mac Os X » Zvinotaridza kuti svondo rino hatizove nemabeta shanduro dzeMacOS
Unclutter, 3 mu1 kugadzirisa desktop yedu